Boqortooyada UK oo War cusub ka soo saartay Doorashooyinka Somalia | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Boqortooyada UK oo War cusub ka soo saartay Doorashooyinka Somalia
Boqortooyada UK oo War cusub ka soo saartay Doorashooyinka Somalia
Qoraal ka soo baxay waaxda Africa ee wasaaradda arrimaha Dibadda ee UK ayaa lagu sheegay baahida degdega ah ee loo qabo in hogaamiyeyaasha Soomaalidu ay yeeshaan kulan ay ku xallinayaan khilaafka ka taagan hergelinta hannaanka doorashada.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in heshiiska geedi socodka doorashooyinka sal looga dhigo heshiiskii ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu gaareen 17-kii September iyo qodobadii soo-jeedinta ee Guddiga Farsamada ay 16-kii Febraayo ka soo saareen shir ay ku yeesheen Baydhabo.
“Boqortooyada UK ma taageeri doonto ficillo horseedaya hannaan doorasho oo hal dhinac ah, kuwa isbarbar socda ama muddo kordhin lagu sameeyo muddo xileedyadii hore,” ayaa lagu yiri qoraalka oo lagu shaaciyay bogga Twitter ee safaaradda UK ee magaalada Muqdisho.
“Annagoo ka duuleyna danaha dadka Soomaaliyeed, iyo danaha wadajirka ah ee aan ka leennahay amniga, horumarka iyo kobaca Soomaaliya, waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyeyaasha Soomaaliya in ay ka gudbaan ismari waaga taagan, ay furaan wadahadallo wax ku ool ah, islamarkaana ay sida ugu dhaqsaha badan u qabtaan doorashooyin loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo.”
Baaqan ka soo baxay dowladda UK ayaa imanaya ayada oo si loo dhan yahay uu u qabsoomi waayey kulan lagu waday inuu 22-ka bishan Afisyoone uga furmo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, kadib markii ay qaadaceen Axmed Madoobe iyo Saciid Deni, oo kala hoggaamiya Jubaland iyo Puntland.
Previous articleRajada Soo Muuqata ee in Wado tareena oo isku xidhi doonta Dekada berbera iyo khadka tareenka Ethiopia,
Next articleMaraakiib Masar laga leeyahay oo xaalufinaya badda Soomaaliya